Samachar Batika || News from Nepal » प्रचण्ड पत्नी सीताको यो भावुक बनाउने तस्वीर: किन शेयर गरे छोरीहरु गंगा र रेणुले ?
काठमाडौं । शनिवार प्रचण्डका दुई छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहालले आफ्नी आमा सीता दाहालको फोटो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा सार्वजनिक गरे । आमा क्याप्सन लेखेर सार्वजनिक गरेको फोटोमा ३१ हजारले ‘रियाक्ट’ गरेका छन् भने झन्डै १४ हजारले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
बिरामी भएर सुतेकी आमा सीता दाहालसँग छोरी गंगाले आमा र दिदी रेणु दाहालसहित ३ जनाको ‘सेल्फी’ फोटो लिएकी हुन् । फोटोमा सीता दाहाल पहिले भन्दा दुब्लाएको देखिन्छ । सो फोटो सार्वजनिक भएपछि धेरैले उनको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दै स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
के भएको हो सीता दाहाललाई ? यस्तो छ उनको स्वास्थ्य अवस्था
प्रचण्ड पत्नी सीता हाल चितवनमा रहेकी छिन् । चितवनमा दिदी रेणु दाहालको घरमा पुगेका बेला सो तस्वीर लिइएको गंगा दाहालले जानकारी दिइन् । त्यस्तो कुनै सन्दर्भ नभई दिदीसँग भेटेका बेला सो तस्वीर लिइएको उनले बताइन् ।
आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको छोरी गंगा दाहालले बताएकी छिन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्– ‘आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ । फोटो हेरेपछि धेरै मान्छेहरु आ’त्तिएका छन्, त्यस्तो बिग्रिएको छैन । तौल केही घटेको छ ।’
उनको उपचार नियमित रुपमा चलिरहेको छ । नियमित रुपमा थेरापी र औषधी चलाइराखेको उनले बताइन् । दाहालमा विगत ४ वर्षदेखि पार्किन्सन भन्ने स्वास्थ्य समस्या रहेको छ । उनी दुर्लभ स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सी (पी.एस.पी) बाट पी’डित रहेकी छिन् । चिकित्सकहरूका अनुसार यो समस्या मस्तिष्कमा असर परेपछि हुने गर्छ । जसबाट मा’नसिक असन्तुलनका साथै हिड्न, बोल्न र निल्न समेत गाह्रो हुने गर्छ ।
यो समस्या ६० वर्ष उमेर माथिकालाई हुने चिकित्सकहरुको भनाई छ । एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको २०७४ साल मंसिरमा हृदयघा’तबाट नि’धन भएपछि उनमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको थियो । २०७५ साल चैतमा उनलाई उपचारका लागि अमेरिका लगिएको थियो ।
सीताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका आफ्ना पति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जीवनभरी राजनीतिक यात्रामा साथ दिँदै आएकी छिन् । २०५२ सालमा भएको जनयु’द्धमा सपरिवार उनले पनि भूमिगत जीवन बिताएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति २९ चैत्र २०७७, आईतवार ०७:५५